Tsy mazava ny tabilao: tabilety sa dabilio… ? | NewsMada
Tsy mazava ny tabilao: tabilety sa dabilio… ?
Niteraka resabe tato ho ato ny amin’ny fizaran’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena tabilety ho an’ny mpianatra; farafaharatsiny, ho an’ireo ray aman-dreniny mpianatra no mahatonga izay. Inona? Tabilety ve no zava-dehibe sy maika? Na hetahetan’ny mpianatra sy ny ray aman-dreny any ifotony…
Mahabe resaka koa ny hoe: saika tsy araka izay tena hetahetam-bahoaka any ifotony no atao sy imasoan’ny mpitondra fanjakana, fa zavatra hafa… Izay hatrany no misy sy iainana hatramin’izay telo taona izay. Valala tsy an-tanana tsy atolo-jaza, fa izay eo an-tanana no atolotra: na zavatra hafa aza…
Dabilio, tabilao… Izany no mahamaika sy zava-dehibe amin’ny mpianatra any ambanivohitra lavitra any, fa tsy tabilety. Saingy idrikinana fotsiny hoe ilain’ny mpianatra avokoa ireo. Fa inona no tena mahamaika? Tsy izay mahasoa ny mpianatra na ny vahoaka no atao, fa izay mahamety ny mpitondra.
Fanomezana avy atsy sy avy aroa ny tabilety, ka zaraina… Tsy misy fanazavana mangarahara. Takalom-patsa, vidim-pihinanana. Inona àry no takalon’ireny tabilety zaraina ho an’ny mpampianatra sy mpianatra ireny? Efa mahalava fisainana ny amin’ny fifandraisana amin’ny vahiny tato ho ato.
Mby ao an-tsaina amin’izany ny hoe fivarotan-tanindrazana. Ilaina ny fandrosoana, indrindra amin’ny hoe haitao vaovao sy avo lenta… Tsy midika izany hoe tsy ilaina intsony na iniana dinganina ny dabilio, ohatra… Rahoviana vao mba hisy fizarana izany ho an’ireo sekoly mbola manao ladina an-tany?
Tsy manao fampandrosoana araka izay tena hetahetam-bahoaka ifotony sy ny zava-misy ny mpitondra, fa faly volony manaraka ambokony izay atolotry ny any ivelany. Nefa iza no fatra-panazava talohan’izao fitondrana izao fa tokony hitovy tantana ny Malagasy amin’ny fampandrosoana, ny fahazoana vaovao… ?
Tsy mazava ny tabilao amin’izay maika amin’izao fitondrana izao, raha ny sehatry ny fampianarana: tabilety sa dabilio… ? Tsara ny fandrosoana. Anisan’ny nampihetsika ny “Raharaha 72” ny rafitra sekoly miangatra na ny fampianarana mitanila, na eo amin’ny samy Malagasy aza.